दुई सन्तान जन्माउनेलाई रु पाँच हजार पुरस्कार – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/दुई सन्तान जन्माउनेलाई रु पाँच हजार पुरस्कार
पाल्पा । रम्भा गाउँपालिकाले एक वा दुई सन्तान जन्माई परिवार नियोजन गर्नेलाई पुरस्कारको प्रदान गर्ने भएको छ । समाजमा दुई सन्तान जन्माउने स्मार्ट दम्पतीलाई रु पाँच हजार प्रदान गरिने छ । एक वा दुई सन्तान जन्माई परिवार नियोजनका लागि प्रेरित गर्ने तथा जन्मदर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताउनुभयो ।
यस्तै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी अवस्थाको दिगोपनका लागि मातृशिशुको पोषणयुक्त खानामा रु एक हजार पाँच सय सहयोग गनिरे कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
श्रीमान वितेको दुई महिना मै फेरी अर्को बज्र`पात… रुँदा रुँदै सकियो अन्तरवार्ता (भिडियो हेर्नुस्)
कोरना भाइरसका कारण नेपालबाट ३५ विदेशी लाइ त्रिभुवन बिमानस्थलबाटै फर्काइदियो !
रवि लामिछाने र चर्चित कलाकारहरु एकै स्थानमा भेला भएर रा`त्रि`भोजमा म`स्त` !!!